एड्सको औषधि पत्ता लाग्यो, गाइभित्रै यस्तो शक्ति ! - DibyaJyotish (दिव्य ज्योतिष)
एड्सको औषधि पत्ता लाग्यो, गाइभित्रै यस्तो शक्ति !
हिन्दु धर्मशास्त्र अनुसार गाईलाई लक्ष्मी मानेर पूजा गरिन्छ । तिथी, श्राद्ध र चाडपर्वमा गाइको गहुँत र गोबरलाई पवित्र मानिन्छ ।
यो भन्दा पनि संसारकै खतरनाक रोग एचआइभीसमेत निको हुनसक्ने औषधीको खानी गाई नै भएको पुष्टि भएको छ ।
अमेरिकाको नेशनल इन्स्टिच्युट्स अफ हेल्थले यो जानकारी अत्यन्तै उपयोगी भएको बताएको छ । एचआइभी प्राणघात भाइरसका कारण लाग्छ जसले बिरामीको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई ध्वस्त बनाउँछ ।
एक भ्याक्सिनको माध्यामबाट बिरामीको रोग प्रतिरोधात्मक प्रणालीको विकास गराउन सकिन्छ र मानिसमा पहिलो चरणको एचआइभी संक्रमण निको पार्न सकिने अनुसन्धानकर्ताको दाबी छ ।